Tababaradii kulliyada booliska ee Carmo oo hakaday iyo mushaar la?aan laga cabanayo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 29, 2013 6:35 b 0
Carmo, July 29, 2013 – Maamulka degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa muujiyey in ay jirto cabasho badan oo soo wajahday dadka deegaanka iyo kuliyada ciidanka booliska Soomaalyeed ee degmada Carmo, halkaasi oo hakad ku yimi howlihii ka socon jiray.
Gudoomiyaha degmada Carmo Ibrahim Shire Maxamed ?ayaa arintaasi ka hadlay maanta mar uu waraysi siiyey idaacada Daljir, wuxuu sheegay in qorshihii ciidanka ee xerada booliska ee Carmo uu hoos u dhac weyn ku yimid.
Wuxuu sheegay Mudane Shire in tababaradii halkaas loogu qaban jiray ciidamada dowladda iyo kuwa Puntland la weeciyey, wuxuuna arintaas ku daray in ay tahay mid caqabad ku ah horumarkii xerada oo ah mid weyn, maamulka Carmo waxay kaloo xuseen in dayac weyn uu ka muuqdo haatan xerada.
Kuliyadda ciidanka booliska ee Carmo ayaa sanadkii 2005 la furay, waxaana loogu tala-galay goob lagu tababaro ciidamada booliska dowladda federaalka ah iyo kuwa Puntland, gudoomiyaha Carmo wuxuu sheegay in shaqaalaha kuliyadda ay haatan ka cabanayaan mushaar la?aaan.
Halkan ka dhegeyso waraysi Maxamuud Cabdi la yeeshay Gudoomiyaha Carmo